Su'aal: Sida loo dhalaaliyo kalluunka lagu qaboojiyey biyaha - Baaskiil Hike
Bogga ugu weyn » Kaladuwan » Su'aal: Sida loo dhalaaliyo kalluunka lagu qaboojiyey biyaha
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu dhalaali karo kalluunka lagu qaboojiyey biyaha?
Sideed dhaqso ugu dhalaali kartaa kalluunka barafaysan?
Sideed u dhalaalisaa kalluunka?
Ilaa intee ayuu kalluunku ku fiican yahay haddii lagu qaboojiyo biyaha?
Ma ku dhalaali kartaa kalluunka biyo qabow?
Maxaan ugu qasbanahay inaan kalluunka ka saaro baakada ka hor inta aan dhalaalin?
Miyay xun tahay in kalluunka lagu dhalaaliyo biyo kulul?
Waa maxay habka ugu nabdoon ee loo dhalaalo kalluunka barafaysan?
Ma habboon tahay in kalluunka barafoobay la dhalaaliyo ka hor inta aan la karin?
Ma habboon tahay in kalluunka barafaysan la kariyo?
Waa maxay sababta kalluunka la qaboojiyey uu u yahay mid caan ah?
Muddo intee le'eg ayay qaadataa in kalluunku ku dhalaaliyo heerkulka qolka?
Ma cuni kartaa kalluunka barafoobay ee jira 3 sano?
Waa maxay sababta aanad kalluunka ugu dhalaalilin caag?
Muddo intee le'eg ayuu kalluunka barafaysan fadhiisan karaa?
Waa maxay sababta biyaha qabow ay u qurxiyaan si ka dhaqso badan kulaylka?
Intee in le'eg ayay kalluunku ku qaadataa inuu ku dhalaalliyo talaajadda dhexdeeda?
Miyaad miraayadda ku karsan kartaa kalluunka?
Sida ugu dhaqsaha badan oo caan ku ah in kalluunka la qafiifiyo waa biyo qabow. Kalluunku waa inuu ku jiraa boorso xiran si loogu badbaado oo loo ilaaliyo dhadhanka, laguna dhex quusiyo biyaha ilaa uu ka dhalaalayo. Ka tag ilaa si buuxda barafoobay. Waqtiga barafku caadi ahaan waa lix illaa siddeed saacadood halkii lb.
Qaadashada Furaha Ka bilow kalluunka si adag u barafoobay. Horay ha ugu dhalaalilin talaajadda. Ha ka saarin baakooyinka faakuumka ka hor inta aanad dhalaalin. Kalluunka oo lagu dhalaaliyo "qaran" biyaha hoostooda waxay ka dhigtaa mid biyo badan. Isticmaal kaliya biyaha tuubada qabow si aad u dhalaaliso sababtoo ah tani waxay yaraynaysaa khatarta koritaanka bakteeriyada. Isticmaal kalluunka la dhalaaliyay isla markiiba si aad u hubiso natiijooyinka ugu fiican!.
Si aad si dhakhso ah u dhalaaliso kalluunka, marka hore ku rid kalluunka bac dabooli kara oo dhammaan hawada ka soo saar ka hor inta aanad xidhin. Haddii aad qaybo kalluunkaaga ku dhex haysay bacda faakuumka xidhan, markaa waxaad kaga tagi kartaa baakadeeda. Marka baraf laga dhigo had iyo jeer kalluun isla markaaba. Ku raaxayso cashadaada sanduuqa kalluunka!!Jul 29, 2016.
Nadiifinta Kalluunka Qaboojiyaha Habka ugu badbaadsan ee lagu qaboojin karaa kalluunku waa in lagu dhex sameeyo talaajadda habeenkii. Kaliya ka soo wareeji qaboojiyaha una wareeji talaajadda ka hor intaadan seexan oo waxay diyaar u noqon doontaa in la kariyo maalinta xigta. Haddii kalluunkaagu faakuum daboolan yahay, maaha inaad ka walwasho inuu soo daayo.
Marka aad kalluunka biyaha ku qaboojiso, kalluunka caatada ah weli waxa uu sii jiraa ilaa 6 bilood halka kalluunka dufanku weli uu sii jirayo ilaa 4 bilood. Haddi aad isticmaasho biyaha ama dhaldhalaalka barafka ma kordhinayso wakhtiga qaboojinta laakiin waxa ay saamayn kartaa qallaylka iyo dhadhanka kalluunkaaga marka aad baraf ka saarto si aad u isticmaasho.
Habka ugu dhaqsaha badan oo si fiican loo yaqaan ee barafaynta kalluunka waa biyo qabow. Kalluunku waa inuu ku jiraa bac xidhan si badbaadada iyo dhadhanka loo ilaaliyo, oo lagu dhex qariyo biyaha ilaa uu barafoobayo. Ka tag ilaa si buuxda u barafoobay.
Si loo dilo bakteeriyada soo saarta botulism-ka, waxaa aad muhiim u ah in laga saaro baakidhka faaruqinta ka hor inta aanad dhalaalin kalluunkaaga. Markay jirtaa C. botulinum -ka xun ee soo gaadhay oksijiin, waxay awoodi doontaa inay soo saarto sun halis ah.
Biyaha baraf-qabow si dhakhso ah uguma dhimi doonaan kalluunka laakiin biyo diirran ama kulul ayaa khalkhal gelin doona qaabka kalluunka (waxaad heshay farriintaas ku saabsan iska ilaali isbeddellada heerkulka, sax?). Laakin baddal 20 ama 30 daqiiqoba mar ilaa kalluunka uu si buuxda u dhalaalayo, si aad u hubiso in biyuhu qabow yihiin.
Habka ugu wanaagsan ee loo dhalaali karo cuntada badda waa si tartiib tartiib ah, adigoo gelinaya qaboojiyaha habeenkii. Ka fogow wasakhaynta isdhaafka ah adiga oo dhalaalinaya cuntooyinka badda meel ka fog wax soo saarka cusub. Haddii aad u baahan tahay inaad si dhakhso ah u dhalaaliso qayb ka mid ah kalluunka, ku rid bac-siibka oo ku dhex geli biyo qabow.
Inkasta oo ay jiraan noocyo kalluun ah oo si fiican u kariya iyada oo aan xitaa la dhalaalin (kalluunka caatada ah, sida tilapia iyo cod, ayaa si toos ah uga soo bixi kara qaboojiyaha ilaa digsiga dubista ama digsiga), inta badan waxa ugu wanaagsan in si buuxda loo dhalaaliyo kalluunka ka hor inta aan la karinin. Hubaal, waxaad ku dhalaali kartaa kalluunka si tartiib ah qaboojiyaha.
Karinta kalluunka barafaysan? Waxaad gabi ahaanba ka boodi kartaa habka dhalaalida oo waxaad toos uga karin kartaa kalluunka barafaysan qaboojiyaha. Waxaad u baahan doontaa inaad ku darto dhowr daqiiqo wakhtiga karinta cuntadaada si aad ugu xisaabtanto dhalaalla'aanta, laakiin waxaad kari kartaa ugaarsiga, uumiga, dubista, dubista ama dubista kalluunka si toos ah qaboojiyaha! May 2, 2019.
Sheet-ka qishka waxa uu sharaxayaa in unugyada kalluunka ku jira ay ka kooban yihiin dareere, iyo marka dareerahaasi uu baraf galo waxa ay abuuraan crystals baraf. Marka ay kiristaalo barafka dhalaaliyaan, dareeruhu waxa uu ku shubaa kalluunka, taas oo keenta khalkhal xun (iyada oo loo sii marayo Spruce Eats). Haddii aad rabto in aad marinate kalluunkaaga, hubi inaad sidaas samayso kaliya ilaa 30 daqiiqo.
Kalluunka waa in aan waligiis lagu dhalaalin heerkulka qolka sababtoo ah heerkulka diiran ayaa u oggolaanaya bakteeriyada inay koraan. Isticmaal mid ka mid ah hababka hoos lagu tilmaamay. Waqtiga dhalaalidda: 6 ilaa 24 saacadood, iyadoo ku xidhan tirada. Guud ahaan, 6 ilaa 8 saacadood halkii pound.
Kalluun kasta oo la qaboojiyey ama qolofleyda qolofta leh waxay ahaan doonaan badbaado aan xad lahayn; si kastaba ha ahaatee, dhadhanka iyo dhadhanka ayaa yaraan doona kaydinta dheer ka dib. Si aad u hesho tayada ugu fiican, qabooji (0 °F / -17.8 °C ama ka yar) kalluunka la kariyey ilaa 3 bilood.
Suntu waxay sababtaa cudur nafta halis gelinaya oo loo yaqaan botulism. Furitaanka baakadda marka la dhalaalinayo kalluunka baakadaysan ee faakuumka, ogsijiinta ayaa ku jirta, kudka ku dhacana ma soo saari doonaan unugyada daaqsinka ah ee soo saara sunta. Listeria monocytogenes waa bakteeriyada faddarayn karta cuntada.
Marna ha uga tagin qaboojiyaha cuntooyinka badda ama cuntooyinka kale ee waxyeeli kara in ka badan 2 saacadood ama in ka badan 1 saac marka heerkulku ka sarreeyo 90 ° F. Bakteeriyada sababi karta jirro si dhaqso leh ayey ugu koraan marka heerkulku kululaado (inta u dhaxaysa 40 ° F iyo 140 ° F).
Biyaha kulul had iyo jeer waa in ay wax ka qaboojiyaan si ka dhaqso badan biyaha qabow. Taasi waa sababta oo ah heerka socodka kulaylka ee u dhexeeya labada shay mar walba wuu kordhaa marka farqiga heerkulka u dhexeeya uu kordho.
Sida loo qaboojiyo kalluunka iyo cuntada badda. Habka ugu fiican ee lagu qaboojin karo cuntada barafaysan si badbaado leh waa si tartiib ah qaboojiyaha. Taas macnaheedu waa ka saar kalluunkaaga qaboojiyaha oo aad geliso qaboojiyaha habeenkii, ama qiyaastii 12-18 saacadood iyadoo ku xiran xajmiga kalluunka ama gogosha.
Sida ugu badbaado badan ee kalluunka loo qaboojin karaa waa in la geliyo qaboojiyaha. Ha: kalluunku ha ku dhalaalin miiska miiska ka Adiga oo ka soo baxa qaboojiyaha ilaa heerkulka qolka kaliya ma beddeli karo qaabka kalluunkaaga, laakiin waxa ay sidoo kale u horseedi kartaa in bakteeriyada ku korto kalluunkaaga.
Su'aal: Ilaa intee in le'eg ayaa lagu dhalaaliyaa kalluunka barafaysan ee biyaha
Jawaab Degdeg ah: Ilaa intee in le'eg ayaa lagu dhalaali karaa kalluunka barafaysan ee biyaha qabow
Su'aal: Ma ku dhalaali karaa kalluun barafaysan Microwave-ka
Ma ku dhalaali karaa kalluun barafaysan Microwave-ka dhexdiisa
Su'aal: Miyaan baraf ka dhigi karaa Kalluunka Qaboojiyay
Su'aal: Ilaa intee in le'eg ayaa baraf ka samaysan kalluunka barafaysan
Jawaab Degdega ah: Ma ku dhalaali karaa Kalluunka Barafsan Dibadda
Su'aal: Ilaa intee in le'eg ayaa la dhalaali karaa kalluunka barafaysan
Jawaab degdeg ah: Ma ka dhalaali karaa balaastigga kalluunka barafaysan ee Dukaanka Dukaanka
Jawaab degdeg ah: Ilaa intee ayaad dhalaali kartaa kalluunka barafaysan
Su'aal: Ilaa intee ayaad dhalaalaysaa kalluunka barafaysan
Su'aal: Intee in le'eg ayuu Kalluunka barafaysan dhalaalinayaa